Soso-kevitra avy amin'ny Semalt amin'ny famoahana ireo fanadinadinana spam avy amin'ny Analytics
Mitohy hatrany ny isan'ireo tsipika momba ny spammy ao amin'ny tranonkala androany. Ny sampan-tserasera sasantsasany voakasik'ireo tranonkalan'ny mpanjifa dia nitatitra zava-nitranga izay ahitàna tsipika maromaro maromaro hita ao amin'ny tatitra Google Analytics. Ilaina ny manatanteraka dingana izay manampy amin'ny fanesorana spam referral haingana araka izay azo atao avy amin'ny tatitra analytics. Izy ireo dia loharanom-pitaka ao amin'ny antontan'isa momba ny fampiroboroboana, ka nahatonga ny fandikana diso ny tranonkala. Mampidi-doza ho an'ireo mpampiasa mitsidika an'io tranonkala io ihany koa. Ny antony dia mety haniry ny hitsidika ny tranonkalan'ny mpitsidika ireo mpampiasa ireo ary hampiakatra ny rafitry ny ordinaterany amin'ny virosy na trozans.
Misy fomba maro hanalana ny rohy spam amin'ny tatitra Google Analytics. Ireo teknika ireo dia manana ny fahamendrehany, saingy ity fomba manaraka ity, izay nofaritan'i Artem Abgarian, ny Senior Manager Success Manager Semalt , dia heverina fa ny mahomby indrindra. Izany dia hampihena ny ankamaroan'ny loza mety hitranga amin'ny spam referral.
Hanombohana ity dingana ity, dia manokatra ny mombamomba anao Google Analytics, ary fidio ny fomba fijerin'ny mpampiasa. Tadidio foana ny manangana fomba fijery vaovao rehefa mampihatra ny sivana ary mamela ny tsy filalaovana ho loharanom-kaonty mora, ary ny teboka azo antoka raha misy zavatra diso diso tafiditra amin'ny tsipika.
1. Famintinana Bot
Izany dia endri-javatra vaovao ao amin'ny Google Analytics izay manasongadina ny sombin-dresaka bot amin'ny tatitra momba ny analytics..Tsy mamafa spam manontolo amin'ny fitsangatsanganana izy io, fa ny fanombohana tsara kosa. Fantenao fialantsasatra avy amin'ny fijerena mombamomba anao izay tianao hosivanina. Eo amin'ny faran'ity pejy ity dia misy bokotra misokatra misokatra, izay manosika ny mpisera hanaisotra ny fifamoivoizana rehetra amin'ny fanta-daza sy ny sponjy. Jereo izany ary vonona ny handeha ianao.
2. Fanampiana fanavakavahana
Mazava ho azy fa mitaky ezaka bebe kokoa noho ny fanivanana bot. Ao amin'ny fizarana Admin ao amin'ny GA, tsindrio ny Filtres rehetra, ary eo an-tampony dia safidy ny mamorona sivana vaovao (ny bokotra mena). Ny fametrahana ny kaonty amin'ny kaonty dia mora kokoa ny manatanteraka sy mitantana. Azo atao ihany raha toa ny mpisera amin'izao fotoana izao nahazo alalana avy amin'ny webmaster.
Lazao ny sivana amin'ny anarana manoritsoritra toy ny "Remove (Site)." Tokony ho sivana amin'ny sivana izy io. Jereo ny bokotra Exclude, ary avy ao amin'ny menio fanala ao amin'ny sivana, alao ny "Referral." Alefaso ny URL izay tianao hofenoina ao anaty laminasa fisie. Alefaso any amin'ny faritra izay ahitan'ny mpisera izay fomba fijery hampihatra ny fanovana. Tsindrio eo amin'ny iray ary ampio amin'ny lisitra, ary tsindrio Save
3. Fitsapana sy fanamarinana
Ity ny dingana farany amin'ny dingana mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny tatitra Google Analytics mandritra ny roa herinandro manaraka mba hijerena raha toa ka miasa ny sivana. Zava-dehibe ny mampiditra an-tsoratra any am-piandohan'ity dingana ity izay manondro ny antony nahatonga ny fifamoivoizana mialoha ny fanivanana. Raha misy fiovana maromaro hita, dia azo antoka izao ny fampiharana ireo sivana mankany amin'ny hevi-dehibe. Misy lisitra lava momba ny spam bots amin'ny Internet, ary misy vaovao fanampiny isan'andro, mba hanampiana ireo tompon-tranonkala hamantatra ireo angon-drakitra tsy ara-dalàna ary ampitahao amin'ny zavatra ao anatin'io lisitra io Source .